tanànan’Antehiroka mikasika ny tokony hanatonan’izy ireo ny kaominina, indrindra fa ireo nanangana trano na tamboho tsy ara-dalana dia mbola ny 50 %-n’ny mponina ihany no nahefa hatreto. Ny 50 % ambiny dia mbola miziriziry amin’ny heviny avokoa ka tsy maintsy handray fepetra ny kaominina. Hifarana amin’ity volana mey ity ny fanentanana ny mponina, hoy ny Ben’ny tanàna. Ho an’ireo mbola minia mikipy dia hisy ny sazy hampiharina aminy. Anisany ny fampitomboana ny vola tokony haloan’izy ireo izay tsy nisy sazy hatramin’izay. Nambarany fa tsy mbola hiroso amin’ny fandrodanana aloha izy ireo fa ny fahatsapan-tenan’ny tsirairay no andrasany. Mikasika ny asa fampandrosoana ny tanàna kosa dia mitohy hatrany ny asa fanadiovana faobe tanterahin’ny kaominina Antehiroka amin’izao fotoana izao ho fiarovana ny fahasalaman’ny mponina amin’ireo karazan’aretina maro samihafa sy ny asan-jiolahy ateraky ny lobolobo.